Benzylisopropylamine ， Toetran'ny endrika: Kristaly mangarahara lehibe. Fepetra fitahirizana: Tehirizo ao amin'ny trano fanatobiana entana misy rivotra sy mafana. Halaviro ny afo sy ny hafanana. Tokony hotahirizina misaraka amin'ny mpandraharaha mihena amin'ny alikaola, alaviro ny fitehirizana mifangaro amin'ny fomba rehetra. Ampiasao amin'ny karazany sy habe mifanentana ...
Ireo mpanelanelana amin'ny fitsaboana dia azo zaraina ho mpanelanelana amin'ny antibiotika, mpanelanelana antipyretika ary mpitsabo mpanelanelana, mpanelanelana amin'ny rafi-panafody kardia, mpanelanelana amin'ny fitsaboana anti-homamiadana sns. Misy karazany maro ny fanafody manokana inte ...
Ny asidra biolojika dia manondro ireo fitambarana biolojika misy asidra. Ny asidra biolojika mahazatra indrindra dia ny asidra karboksilika, ny asidra dia avy amin'ny vondrona karboksil. Ny calcium calcium, acetic acetic, sns. Dia asidra biolojika, izay afaka mihetsika amin'ny alikaola mba hanjary esera. ★ Ny anjara asan'ny asidra biolojika amin'ny vokatra anaty rano ...
avy amin'ny admin tamin'ny 21-06-19
Ireo antsoina hoe mpanelanelana amin'ny fivarotam-panafody dia tena akora simika na vokatra simika ampiasaina amin'ny fizotran'ny synthesis fanafody. Ny simika, izay tsy mitaky fahazoan-dàlana hamokarana zava-mahadomelina, dia azo hamokarana zavamaniry simika mahazatra ary, rehefa mahatratra ambaratonga sasany, ...
Ahoana ny fampiasana ny potasioma potasioma hanatsarana ny valin'ny setroka hafanana amin'ny akoho amam-borona ao anaty hafanana mitohy?
Ny vokatry ny hafanana be mitohy eo amin'ny akoho amam-borona: rehefa mihoatra ny 26 ℃ ny mari-pana manodidina dia mihena ny fahasamihafana eo amin'ny akoho amam-borona ary ny hafanan'ny ambaratonga dia mitombo, ary mitombo ny fahasahiranana amin'ny famoahana hafanan'ny vatana, izay mitarika fihenan'ny fihenjanana. Mba hanafainganana ny hafanana d ...
Fandaharana manerantany momba ny tsena sy kalsioma Propionate
Ny Global Calcium Propionate Market Outlook Report dia fanadihadiana feno momba ny indostrian'ny Calcium Propionate sy ny hoaviny amin'ny ho avy. Manerantany, ny propionat calcium dia mampiakatra ny tohatra ao amin'ny sokajy antimicrobial of preservatives. Antony toy ny fiantohana ara-tsakafo, fampitomboana ny fangatahana l ...
Fampidirana momba ny Tributyrin
Additive feed: Tributyrin atiny: 95%, 90% Tributyrin ho toy ny additive feed mba hitondra fanatsarana ny vavonin'ny fahasalamana amin'ny akoho amam-borona. Ny fivoahana ireo antibiotika dia ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny sakafom-borona akoho amam-borona dia nampitombo ny fahalianana amin'ny paikady sakafo hafa, ho an'ny fiompiana akoho amam-borona isaky ny ...
Antibiotika alternativa-fampifanarahana potasioma
Potassium Diformate CAS NO: 20642-05-1 Ny foto-kevitry ny Potassium Diformate ho an'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny biby. Raha ny kisoa ihany no manome sakafo mba hampiroboroboana ny fitomboana, dia tsy afaka mamaly ny filan'ny otrikaina mihombo izy io, fa miteraka fandaniana loharano koa. Izy io dia dingana iray avy ao anatiny ka hatrany ivelany hanatsarana ny tsinay envi ...
Calcium Propionate, Kalsiôma Acetate
Shanghai Dumi Biotechnology Co., Ltd, mikaroka sy mamorona vokatra vaovao: Calcium Propionate, Calcium Acetate. Calcium propionate dia mpiorina antifungal azo antoka ho an'ny sakafo sy sakafo ankatoavin'ny World Health Organization (WHO) sy ny Food and Agriculture Organisation of the United Nation ...
Fampiharana diformate potasioma amin'ny fametahana sakafo
Ao amin'ny indostrian'ny fiompiana, na fiompiana lehibe ianao na fiompiana ao amin'ny fianakaviana, ny fampiasana additives amin'ny feed dia zava-dehibe indrindra fahaizana fototra izay tsy miafina. Raha te hanana marketing bebe kokoa sy fidiram-bola tsaratsara kokoa ianao, ny additives famahanana avo lenta dia iray amin'ireo antony ilaina. Raha ny marina, ny fampiasana feed ...
Mpanelanelana fanafody mahazatra mahazatra
Mpanelanelana mpanelanelana manan-danja maro: 1, 1- (6-methoxy-2-naphthyl) ethanol Misy fomba maro hanamboarana ny naproxen, izay anisany ny làlam-pandrefesana carbonyl dia ambony noho ny làlana nentim-paharazana noho ny fisafidianana ambony sy ny finamana amin'ny tontolo iainana. Ny mpanelanelana lehibe ho an'ny ...
Nentin'ny fampivoarana haingana ny tsenan'ny fivarotam-panafody manerantany, ao anatin'ny fifaninanana vidin'ny zava-mahadomelina mahery vaika, ho fanaraha-maso ny fandaniana, ny API sy ny indostrian'ny mpanelanelana amin'ny fanafody dia mila mifindra any amin'ireo firenena an-dàlam-pandrosoana manana tombony amin'ny vidiny. Na izany aza, Sina, India an ...